Astronomical unit - ဝီကီပီးဒီးယား
Astronomical Unit (သင်္ကေတ au, AU သို့မဟုတ် ua) ဆိုသည်မှာ နေမှ ကမ္ဘာမြေသို့ အကွာအဝေးဖြစ်ပြီး အတိအကျဆိုလျင် ၁၄၉၅၉၇၀၇၀၀ မီတာ (၁၅ဝ မီလီယံ ကီလိုမီတာခန့်၊ သို့မဟုတ် မိုင်သိန်းပေါင်း ၉၃ မိုင်ခန့်) ဖြစ်သည်။ AU အား အဓိကအားဖြင့် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဂြိုဟ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအား တိုင်းတာရာတွင် အသုံးချသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် International Astronomical Union (IAU) မှ AU အဖြစ် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
au or AU or AU
1 au or AU or AU in ... ... ညီမျှသည်မှာ ...
1 AU = ၁၄၉၅၉၇၈၇၀၇၀၀ မီတာ (အတိအကျ)
≈ ၉၂.၉၅၅၈၀၇ မီလီယံမိုင်
≈ ၁ parsec ၏ အပုံတစ်သိန်းပုံ ၄.၈၄၈၁၃၆၈ ပုံ
≈ ၁ အလင်းနှစ် ၏ အပုံတစ်သိန်းပုံ ၁၅.၈၁၂၅၀၇ ပုံ
↑ International Astronomical Union, ed. (31 August 2012)၊ "RESOLUTION B2 on the re-definition of the astronomical unit of length" (PDF)၊ RESOLUTION B2၊ Beijing, China: International Astronomical Union၊ The XXVIII General Assembly of International Astronomical Union … recommends … 5. that the unique symbol "au" be used for the astronomical unit.
↑ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Instructions for Authors။ Oxford Journals။ 2015-03-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “"The units of length/distance are Å, nm, µm, mm, cm, m, km, au, light-year, pc.”
↑ Zeilik၊ Michael; Gregory၊ Stephen A. (1998)။ Introductory Astronomy & Astrophysics (fourth ed.)။ Saunders College Publishing။ pp. 6, G-2။ ISBN 0030062284။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Astronomical_unit&oldid=744291" မှ ရယူရန်
၂၁ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၇:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၇:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။